Raad Raac News Online – Xildhibaan Yusuf Xasan oo ka soo Galay Kamakuunji oo ku Dhawacmay Qaraxa Nairobi
Xildhibaan Yusuf Xasan oo ka soo Galay Kamakuunji oo ku Dhawacmay Qaraxa Nairobi
Warar hor dhac ah oo hataan na soo gaaray ayaa sheegayo in qaraxii caawo u ku dhaawacay Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane laga soo doorto deegaanka Kaamakunji.
Ujeedka qaraxaasi ayaa lagu sheegay in uu ahaa mid lagu doonayay in qaarijiyo xildhibaanka haseyeeshee uu ka badbaaday waxana ka soo gaaray dhacay fudud xili uu ka soo baxayay Masaajidka Weyn ee Al-hidaya.
Masuul ka tirsan Xafiiska Xildhibaanka ayaa xaqiijiyay dhaawaca Xildhibaanka iyo weliba qaar ka tirsan ilaaladiisa.
Xaalada xaafada Islii ayaa weli cakiran,iyadoona haatan ay socdaan rabshado dhagax tuur ah oo ay wadaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku hubeysan Dhagaxyo iyo weliba Baangado,waxaan iminka xiran wadad jaamka halkaasi oo holac islamarkaan lagu gubay taayarada gaadiidka.
Ciidanka Amaanka ayaa Goobta ku gedaman iyadoo isku dayayan inay hakiyaan Rabshadaha goobta ka socda oo hakad geliyay Ganacsiga iyo dhaqdhaqaqa wadada Jaamka Caawa, Qaraxa Caawa ayaa la Xaqiijiyay inay ku dhawacmeen Qaraxa Masjidka waana kii ugu Horeyey ee Noocisa ah ee ka dhaca Nairobi ama Kenya.